Basola ugesi omusha abashelwe umuzi e-Swapo | News24
Basola ugesi omusha abashelwe umuzi e-Swapo
ISITHOMBE:nokulunga ngobese UMnu Eric Xaba emi ngaphandle komuzi wakhe oshe wangqongqa emasontweni amabili edlule.
USOLA uhlelo olusha lokufakwa kukagesi umndeni wase-Swapo B osele dengwane emva kokuba umuzi wawo ushe wangqongqa ngesonto eledlule.
Lo mndeni wakwaXaba onamalungu amane uthi kumanje uncike komakhelwane emva kokuba ubuye emsebenzini wahlangabezana nobuhanguhangu bo mlilo obebucishwa omakhelwane.
Uathi yize belibikele ikhansela lakwa ward 30 uMnu Jay Singh bebengakakutholi ukusizakala njengoba besizwa omakhelwane nangezingubo zokulala.
Umnikazi womuzi uMnu Eric Xaba uthe basola isigubhu esisha sikagesi esifakiwe, njengoba abebekhona kwenzeka lesi sigameko bethi kuqale kwaqhuma sona. Ngonyaka odlule uMasipala uMsunduzi ngokuhlanganyela noMnyango wezeziMali KwaZulu-Natal bamemezela ukuthi kunemizi engama-2000 yase-Swapo, Nhlalakahle naseZinketheni ezongena ngaphansi kohlelo olusha lokufakelwa ugesi.
Kwathiwa imbangela yokufakwa kwawo ukugwema izigameko eziningi zokuxhunywa kwawo ngendlela engekho emthethweni eyaziwa ‘ngezinyokanyoka’.
Umndeni wakwaXaba ungeminye yemizi engaphansi kohlelo lokufakelwa ugesi umasipala kule ndawo.
Ekhuluma nephephandaba uXaba uthe: “Mina ngijwayele ukuba khona ekhaya, kodwa ngenhlanhla senzeke lesi sigameko nami ngingekho. Ngibuye nababuya emsebenzini sekugcwele omakhelwane bezama ukucisha umlilo.
“Sisele nalokhu esikugqokile kuphela njengoba kushe ngisho omazisi.”
Indodana ka Xaba uThembelani uthe basola ukuthi kube khona iphutha elenzekile ngenkathi kuxhunywa lo gesi omusha njengoba bebeshiye zonke izinto ezisebenza ngogesi zicishiwe.
“Bese kuphele isonto lo gesi ufakiwe njengoba bese kuphele u-R100 wokuqala obufakiwe, sesifake u-R750 lowo ogunyaziwe ukuthi siwufake. Asazi ukuthi kuthintekephi okube yiyona mbangela yokusha komuzi,” ephetha.
Ukhale ngokuthi yize sekuphele isonto balubika udaba, abekho asebeke bafika ukuzobabheka.
Lithintwa ngalolu daba ikhansela uMnu Singh ukuphikile ukuthi uke wabikelwa ngalolu daba, waqeda wavala ucingo. Okhulumela umasipala wase Msunduzi uNksz Nqobile Madonda uthe: “Uhlelo lokufakelwa ugesi seluqalile kule ndawo, kodwa ayikho imizi esafakelwe. Kungenzeka ukuthi uma uxhunyiwe kulo muzi, uxhunywe ngendlela engekho emthethweni.”